कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन: को होला नयाँ सभापति ? « Bagmati Page
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन: को होला नयाँ सभापति ?
नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको अन्तिम मिति तय गरेको छ। फागुन ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय अनुसार आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरिएको हो।
हुन त कांग्रेसले पटक–पटक मिति तोके पनि कहिले कुन कारण त कहिले के भन्दै निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुन सकेको थिएन। यसअघि गत वर्षकै पुस ११ गते निर्धारण गरिएको मिति यसै वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म थियो। यो मितिमा अधिवेशन भएको भए भने कांग्रेसले अहिलेसम्म नयाँ कार्यसमिति पाइसकेको हुन्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन।
२०७२ साल फागुन १९ मा भएको १३ औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसले विधान अनुसार त्यसको चार वर्षमै अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो तर थपिएको एक वर्षसम्म पनि महाधिवेशन हुन नसक्नुलाई लोकतन्त्रको हिमायती भनेर आफूलाई परिभाषित गर्दै आएको कांग्रेसको अक्षमता भन्नेहरु पनि छन् । अब यसपटक तोकिएको समयमा भने कांग्रेसले जसरी पनि महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ, किनकी संविधानले दिएको विशेषाधिकारमै रहेर कांग्रेसले नयाँ मिति निर्धारण गरेको हो। यो समय घर्काउने हो भने कांग्रेसले आफ्नो वैधानिकता पूर्णतः गुमाउनेछ।
महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै कांग्रेसमा यतिबेला नेतृत्व कसले पाउला भन्ने चर्चा हुन थालेको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने कांग्रेसमा तीन समूह सक्रिय छन्। सभापति शेरबहादुर पक्ष एकातिर छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष पनि नेतृत्व लिने सुरमा छ। यस्तै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि आफ्नै समूह सक्रिय बनाउँदै महाधिवेशनको तयारीमा छ । तीनवटै समूहबाट झन्डै दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले सभापतिमा आफूलाई दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एउटै समूहबाट धेरैले सभापति पद ताकेपछि नेताहरूबीच भागबन्डा मिलाउन सकस देखिएको छ।
यतिबेला सतहमा देखिएका सभापतिका दाबेदारमध्ये वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल त छँदैछन्। यसका साथै तेस्रो समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सभापतिका सम्भावित उमेद्वार हुन्। यसैगरी, देउवा समूहका वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठले पनि आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यता पौडेल समूहका भनिएका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र डा. शेखर कोइरालाले सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्। उता गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालाले पनि सभापतिमा आफ्नो दाबी रहने बताउँदै आएकी छन्।
पौडेल समूहबाटै डा.रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी सभापति पदका थप आकांक्षी हुन् भने सिटौला समूहबाट युवाबीच लोकप्रिय छवि बनाएका नेता गगनकुमार थापाले पनि सभापति पदमा उमेद्वारी दिने बताएका छन्। १३ औं महाधिवेशनमा देउवा, पौडेल र सिटौलाबीच सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। उक्त अधिवेशनमा पहिलोचरणमा कुनै पनि उमेद्वारले ५० प्रतिशत मत नल्याएपछि दोस्रोचरणमा सिटौलाको समर्थनमा देउवा निर्वाचित भएका थिए।
हुन त देउवाले अहिले नै आफूलाई सभापतिकै रुपमा दाबी भने गरिसकेका छैनन्। तर, नेता/कार्यकर्तासँगको भेटघाटसँगै पार्टीभित्र प्रभाव बलियो बनाउन उनले यसअघि विभिन्न विभाग गठन र मनोनयन गरिसकेका छन्। पौडेल समूहको चर्काे विरोध र आलोचनाबीच पनि उनले विभागलाई पूर्णता दिने काम गरेकाले उनी आफूलाई थप बलियो बनाउने प्रयासमा छन् भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
तीनवटै समूहबाट झन्डै दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले सभापतिमा आफूलाई दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। एउटै समूहबाट धेरैले सभापति पद ताकेपछि नेताहरूबीच भागबन्डा मिलाउन सकस देखिएको छ।
कतिपय नेताहरूले अब कांग्रेससामु आइपरेको अवसरलाई सही सदुपयोग गर्नसक्ने नेतृत्व चाहिने बताइरहेका छन्। यसअघि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीलाई सही दिशामा अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाइएको थियो। २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले भोगेको पराजय देउवाकै असक्षमताका कारण भएको धेरैको विश्लेषण थियो। तर, अब समय फेरिएको छ। सत्तामै रहेको नेकपामा दुई धार स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने यतिबेला नेकपा न जोडिन सकेको छ न फुटेको नै। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आफूलाई थप बलियो सावित गर्न सक्ने नेतृत्व खोजेको छ। यो नेतृत्व पुरानै अनुहारले पूरा गर्ला वा नयाँ खोज्नुपर्ने हो त्यो कांग्रेसको आन्तरिक विषय हो।
देउवाले आफू नेतृत्वमा दोहोरिने संकेत गरिरहेकै बेला निधिको पनि सभापतिको तयारीले यहाँ अन्योल पैदा गरेको छ। उता यसअघि सभापतिमै पराजित वरिष्ठ नेता पौडेल पनि नेतृत्वका लागि तयार छन्। तर, आफ्नै समूहका अन्य नेताहरु पनि सभापति पदका लागि आकांक्षी देखिएसँगै उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन्। आगामी महाधिवेशनबाट जसरी पनि देउवालाई रोक्ने पौडेलपक्षको तयारी भए पनि देउवा र पौडेलबीच नै फेरि प्रतिस्पर्धा हुने हो कि भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि सभापति पदका लागि आफ्नो सक्रियता बढाएसँगै केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि आफूलाई अबको सभापतिको रुपमा दाबी गरेका छन्। उनले यस अघि १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका थिए।
यस्तै पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह यसअघि संसदीय दलको उपनेता भइसकेका छन् । अहिले उनले आफू सभापति पदका लागि स्वाभाविक दाबेदार भएको बताउँदै आएका छन्। यता सिटौला पनि १३ औं महाधिवेशनमा तेस्रो धार खडा गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। उनले यसपटक पनि आफ्नो उपस्थिति त्यसरी नै अघि बढाउने सोच बनाएका छन्। यतिबेला पार्टीभित्र उनलाई निर्णायक शक्तिका रुपमा पनि लिइएको छ। उनले देउवा वा पौडेलमध्ये एक समूहलाई सहयोग गर्ने हो भने कांग्रेसमा अबको नेतृत्व उसैले पाउने निश्चित छ।
सुजाता कोइरालाले पनि आफू बाबुको विरासत जोगाउने संकेत गरेकी छन् भने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत तथा गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा इच्छा देखाएका छन्।
यता गगन थापाजस्ता युवा नेताले अहिले नै सभापतिको दाबी गर्ने बेला नभएको र उनले महामन्त्रीसम्म पाउन सके भने त्यही नै ठूलो र महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने केहीले बताइरहेका बेला थापाले पनि यसमा आफ्नो दाबी रहने बताएपछि प्रतिस्पर्धा राम्रै हुने संकेत देखिएको छ।
यसरी कांग्रेसभित्र दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले सभापतिमा दाबी गरिरहेका देखिन्छन्। जसले आगामी महाधिवेशन निकै चासो र रोचक बनाउने पक्का भएको छ। यस विषयमा उनीहरु आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। अबको कांग्रेस हाँक्ने सारथी को होला? त्यो त महाधिवेशनपछि नै थाहा हुन्छ। यति भन्न सकिन्छ कि अबको कांग्रेसले आफूलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न योग्य नेतृत्व छनोट गर्नु भने पक्कै जरुरी छ। जसले विगतमा कांग्रेसले गरेका गल्ती सच्याउँदै नयाँ ढंगले पार्टी चलाउन सकोस्। -ज्ञानमणि नेपाल